Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Impilo » Ucwaningo lukaHarvard: 'imiphumela emibi' yokugomela i-COVID-19 isengqondweni yakho
Ososayensi base-Boston-based Beth Israel Deaconess Medical Center bafinyelele esiphethweni sokuthi lokho okubizwa 'ngomphumela we-nocebo' - imizwa engemihle ebangelwa ukukhathazeka noma ukulindela okubi - kubalele izingxenye ezintathu kwezine zayo yonke imiphumela emibi ebikiwe yokugoma.
Ngemva kokuhlolisisa imibiko yabahlanganyeli abangaphezu kuka-45,000 esivivinyweni somtholampilo, WaseHarvard Medical School abacwaningi bathi ingxenye enkulu ye Umgomo we-covid-19 'imiphumela engemihle' abantu abathi baba nayo ngemva kwe-jab, ebangelwa okulindelwe abantu hhayi imithi yokugoma.
Abantu abaningi bakhathazeke kakhulu Umgomo we-covid-19 'imiphumela engemihle' bayayizwa ngempela ngisho noma bethola i-placebo, ucwaningo olusha luyabonisa.
Imiphumela emibi ehlukahlukene 'yesistimu', efana nobuhlungu bekhanda, ukukhathala, nobuhlungu bamalunga kwabikwa kuzo zombili izingxenye zeqembu locwaningo: yilabo abathole imigomo ehlukahlukene ye-COVID-19, kanye nalabo abathole i-placebo bengazi.
Ngemuva kokuhlaziya imibiko, ososayensi abavela eBoston-based I-Beth Israel I-Deaconess Medical Centre bafinyelele esiphethweni sokuthi lokho okubizwa ngokuthi 'umphumela we-nocebo' - izinzwa ezingajabulisi ezibangelwa ukukhathazeka noma ukulindela okubi - kubalwa izingxenye ezintathu kwezine zayo yonke imiphumela emibi ebikiwe yokugoma.
Umbiko, owashicilelwa kujenali ye-JAMA Network Open, uthi u-35% wabamukeli be-placebo babike imiphumela engemihle ngemva komthamo wokuqala kanye nama-32% ngemva kowesibili. Okuphawuleka kakhulu "izehlakalo ezimbi" (AEs) zabikwa emaqenjini okugoma, kodwa lokho okubizwa ngokuthi "izimpendulo ze-nocebo" zibalele "ama-76% we-systemic AEs ngemuva kokuqala. Umgomo we-covid-19 umthamo kanye no-52% ngemuva komthamo wesibili.
Ososayensi baphawula ukuthi, nakuba izizathu zokungabaza kokugoma “zihlukene futhi ziyinkimbinkimbi,” ukukhathazeka ngemiphumela engemihle engaba khona evela kumagciwane. Imigomo ye-covid-19 "kubonakala kuyisici esikhulu" futhi "izinhlelo zokugoma zomphakathi kufanele zicabangele lezi zimpendulo eziphezulu ze-nocebo."
Okukodwa kwe WaseHarvard Medical School oprofesa ababambe iqhaza ocwaningweni, bachaza isayensi ebangela “umphumela we-nocebo,” beveza ukuthi “izimpawu ezingaqondile,” njengekhanda elibuhlungu nokukhathala, zibalwe ezincwadini eziningi zolwazi njengemiphumela engemihle evamile yemigomo ye-COVID-19.
"Ubufakazi buphakamisa ukuthi lolu hlobo lolwazi lungabangela abantu ukuba bakhulume kabi ngemizwa evamile yansuku zonke ebangelwa umgomo noma kubangele ukukhathazeka nokukhathazeka okwenza abantu bayiqaphele kakhulu imizwa yomzimba mayelana nezenzakalo ezimbi," esho.
Imakethe yokujova i-Gasoline Direct ilinganiselwa ukuthi izokhula...
I-Shanghai iyalele ukuvalwa okusha kwedolobha lonke
I-Seychelles Sustainable Tourism Label iqinisekisa kabusha ...
Isikhangiso se-Google manje sesivinjelwe e-Russia
Januwari 23, 2022 ngo-23: 03
Nihlazeke bantu! Uma othile efa futhi elimele ngoba ekhohliseka ngokwanele ukuba akholelwe ukuthi igazi lakho lokufunda lisesandleni sakho!
Januwari 22, 2022 ngo-00: 16
Lolu cwaningo kumele lukhokhelwe nguBig Farma Umngane wami ushone emizuzwini eyi-10 ngemuva kukaPfizer
Januwari 21, 2022 ngo-03: 50
Kukhona ukukhathala okuncane futhi kukhona umuntu ongalali emini ushaye phansi futhi ulale izinsuku ezimbili ziqondile. Ngicabanga ukuthi ucwaningo lweDiaconess lungathi 102 fever kanye nokuqhaqhazela amakhaza kuwukucatshangelwa nje, akunjalo?
Abesifazane basabela kakhulu kunabesilisa. Ingabe abantu besifazane bangama-hysterical nje? Cha. I-Estrogen iyisikhuthazi sokuzivikela komzimba futhi i-testosterone icindezela ukuphendula kwamasosha omzimba.
Januwari 20, 2022 ngo-17: 44
Lolu cwaningo luphikisana nedatha ye-CDC kanye nemibiko ye-VAERS. Iphinde iphikisane neminye imininingwane emhlabeni jikelele, okuhlanganisa ne-UK's Yellow Card System.